Indlu encinci yaseFarmstead Hollow
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMegan
I-Cottage yindawo eyonwabisayo yokubuyela emazantsi eentaba ezintle zeBitterroot, iikhilomitha ezi-2 ngaphandle kweHamilton, Montana. Silusapho labane abaphila ubomi obulungileyo kwifama yethu encinci esebenzayo kwaye iCottage yindawo yethu yokurenta iholide ephakathi kumbindi wepropathi yethu. Gqibezela nge-driveway yayo kwaye ibiyelwe kakuhle ukusuka kwezinye iindawo ezixakekileyo ze-barnyard, yahlukile kwindawo yethu, kodwa izinto ezibonwayo zezilwanyana kunye nezandi ngamanye amaxesha ziyinxalenye yamava.
I-Cottage yeyona ndawo intsha yokuqeshiswayo ebomini kwinto eyayikade iyindlu endala ngasemva kwendlu yethu yaseFama yaseVictory yembali ka-1895, kwifama yethu esebenzayo, iFarmstead Hollow (farmsteadhollow.com). Iimayile ezimbini ezintle ngaphandle kweHamilton Mt.
Siyigubungele ngokupheleleyo kwaye sayilungisa ngokutsha i-bunkhouse (kubandakanywa nomgangatho omtsha we-slab oshushu), ukuyibuyisela kwakhona njengendlu enomtsalane ye-850 sq/ft. I-Cottage inekhitshi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela, kubandakanya iwasha kunye nesomisi, kwaye isebenza ngokupheleleyo, ikhululekile, kwaye ilungele iindwendwe. Kumgangatho ophantsi ligumbi lokulala elikhulu elinebhedi etofotofo kaKumkanikazi. Phezulu kwigumbi eliphezulu kukho iibhedi ezintathu ezongezelelweyo ezingamawele.
I-Cottage ibekwe ngasemva kwendlu yethu, ifikeleleka ngendlela yayo. Akukho zifestile kwicala leNdwendwe ejongene nendlu yethu, ngelixa amacala ajonge kwidlelo lethu elinoxolo aphantse abe yifestile - ke imvakalelo yeyokuba bucala kunye nokuba ngasese.
Iyadi encinci ebiyelwe yabucala igqibezela umxholo opholileyo wokubuyela.
Isibaya sethu likhaya lezilwanyana zasefama. I-Cottage yohluliwe kwaye ibiyelwe kakuhle ukusuka kuhambo oluxakekileyo lwemfuyo kunye nabanakekeli bayo, kodwa ngamaxesha athile emini, izandi zezilwanyana zinokuviwa kwipatio kunye nommandla weyadi kwaye mhlawumbi nangaphakathi kwendlwana.
Thina ngokobuqu siyazithanda izandi zeegusha ezibhabhayo, iinkukhu eziqwengayo okanye iihagu ezigqumayo, kwaye sinethemba lokuba umnxeba wezilwanyana ngamaxesha athile okhukuliseka ukuya kwiyadi yendlu yangasese uzisa uncumo kwiindwendwe zethu ezingabantu.
Izilwanyana zitshixelwa ezibayeni ebusuku zize zigcinwe zikhuselekile yaye zithe cwaka de kube yintsimbi yesi-7:00 kusasa ntsasa nganye. Ixesha lesidlo sakusasa efama linokuba yingxokozelo yolonwabo (efunayo) yezilwanyana kunye nokuphithizela - kuquka umqhagi wethu uRolly, othanda ukuqala iintsuku zakhe ngokukhala ngokuzingca. Ihlala ithatha umzuzu okanye emibini, emva koko ingaphezulu kwayo ngaphandle konomyayi onqabileyo apha okanye phaya imini yonke.
Amaxesha okutya okuhlwa asisisiganeko esifanayo, ngaphambi kokuba wonke umntu avalelwe eshedini ukuze alale.
Sinommelwane omnye okude-ekuphela kwendawo yendlu yakhe enokubonwa kwi-Cottage yifestile ye-attic ephezulu.
bhetyebhetye kakhulu check-in kunye namaxesha check-out.